टेलिकमको फोर–जी को शुरुवात जनवरी १ देखि, कसरी चलाउने फोर-जी ? – Recent Nepal News
टेलिकमको फोर–जी को शुरुवात जनवरी १ देखि, कसरी चलाउने फोर-जी ?	काठमाडौं – जनवरी १ देखि नेपालमै पहिलो पटक नेपाल टेलिकमले बहुप्रतिक्षित फोरजी सेवाको व्यवसायीक शुरुवात गर्दैछ । टेलिकमले दु्रतगतिमा इन्टरनेट चलाउने ग्राहकलाई लक्ष्य गर्दै २०१७ जनवरी १ (१७ पुस २०७३) देखि फोर–जी सेवा दिन लागेको हो । यो सेवा पहिलो चरणमा पोखरा र काठमाडौंमा दिने तयारी थालिएको छ ।
पोखरामा मा २५ हजार ग्राहकले मात्र फोर–जी सेवा पाउनेछन् भने काठमाडौंका ३ लाख ७५ हजार ग्राहकसम्म यो सेवा पुग्नेछ । टेलिकमका प्रयोगकर्ता मात्र भएर फोरजी सेवा लिन भने पाउने छैनन् । यसका लागि कम्तिमा आफुले प्रयोग गर्ने मोवाइल फोरजी सपोर्ट गर्ने हुनुपर्छ ।
टेलिकमले उपलब्ध गराउने फोरजी १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डवीथ चल्ने मोवाइलमा मात्र सपोर्ट गर्छ । नेपालमा उपलब्ध सवै फोरजी सपोर्ट मोवाइलमा १८ सय मेगाहर्ज व्याण्डवीथ नभएकोले शुरुमा समस्या हुने टेलिकमको भनाइ छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी छुट्टै योजना ल्याउने समेत टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
Previousचालक अनुमतिपत्र : चार पाङ्ग्रेको अनलाइनवाट दर्ता नहुने,दुई पाङ्ग्रेको लागि यस्तो नियम
Nextशिक्षकलार्इ तलब खुवाउन कुखुरापालन